zinminmaung, Author at Shwe Arr Fertilizer
Posts by zinminmaung
By zinminmaung | February 23, 2021 | 0
ဒီနေ့မှာတော့ ဦးကြီးတို့ကို ပြောပြပေးမည့် အကြောင်းက စပါးပင်မှာ မြေပေါ်ပိုင်း အစိတ်အပိုင်းတွေ ကောင်းစွာကြီးထွားနိုင်ဖို့ များစွာအထောက်အကူပေးနေသော အမြစ်တို့ရဲ့ အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျတော်ထင်ပါတယ် ဦးကြီးတို့ အများစုကတော့ မြေပေါ်ပိုင်းကြီးထွားမှု ကို အဓိကထားကြည့်ပြီး စပါးခင်းကောင်းတယ် မကောင်းဘူး ၊ ကျွေးလိုက်တဲ့ မြေဆီကြိုက်တယ် မကြိုက်ဘူး ဆုံးဖြတ်မယ် ထင်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့ အဲလို မြေပေါ်ပိုင်း အစိတ်အပိုင်းတွေ ကောင်းစွာဖြစ်နေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်ပြုနေသော အမြစ်အကြောင်းကို ဂရုမမှု မိ ဖြစ်နေတက်ပါတယ်။ အမြစ် အမြစ်ဆိုတာက စပါးပင်သက်တမ်း တစ်လျှောက်လုံး ကောင်းစွာ ကြီးထွားနိုင်ဖို့ လိုအပ်သော အရာမှန်သမျှကို ထောက်ပံ့ပေးနေသော အရင်းအမြစ်မိခင်(Source) ကြီးဖြစ်ပါတယ် ။ အရွက်အခက်များ အစာချက်လုပ်ဖို့ရန်အတွက် လိုအပ်သော ရေ(water) ကို အမြစ်မှ ရယူပေးတယ်။ ကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်…
ခေတ်စနစ်တွေပြောင်းလဲလာသည့် နှင့်အမျှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ တောင်သူဦးကြီးများလည်း စိုက်စနစ်အသစ်တွေ ၊ မျိုးအသစ်တွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန်ပြန့် တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးလာကြနေပါပြီး။ ဒီနေ့မှာတော့ ခရမ်းချဉ်သီးနှံအကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးသွားမည်။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်အရွယ်ကဆို မိဘတွေ စိုက်ပျိုးကြသည့် ခရမ်းချဉ်မျိုးများမှာ တိုင်ထောင်စရာမလိုအပ်တဲ့ ဒေသမျိုးများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အပူဒဏ် ၊ အအေးဒဏ် အင်မတန်မှ ခံနိုင်ရည်ရှိသော မျိုးများဖြစ်ပါတယ်။ အသီးသီး မှု အင်မတန်မှ ကောင်းမွန်ပြီး ဓာတ်မြေသြဇာ ကျွေးစရာမလိုအပ်သည်။ မှတ်မိပါသေးသည် ငယ်ငယ်ကဆို မိဘတွေ ခရမ်းချဉ်ခင် ပိုးမွှားရောဂါကျလို့ ဆေးဖျန်းရတာ ရှားပါးသော အဖြစ်ဟု မှတ်ရလောက်ပါသည်။ ခရမ်းချဉ်ခင်းမှာ ဆေးဖျန်းစရာကို မလိုအပ်သည်။ အခုခေတ်အရ Good Agricultural Practices (GAP)စိုက်နည်းစနစ်လို့ ခေါ်လိုရသည်။ ဆေးဓာတ်ကြွင်းကင်းတာကိုး။ ရာစုနှစ်တစ်ခု မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ပြည်ပ…
အရင်အပတ် က Facebook က စိုက်ပျိုးရေး ဂရုတစ်ခုမှာ ကျတော်ကြည့်မိလိုက်တော့ တချို့တောင်သူတွေက ဘာရောဂါကြီးလည်း ၊ ပိုးဥတွေကပ်နေတာလားလို့မေးကြတော့ အော် ဒီရောဂါကလည်း တို့တောင်သူတွေအတွက်အရေးကြီးသကိုး ။ရေးလိုက်ပါဦးမယ် လေဆိုပြီး ………စိတ်ကူးလိုက်မိတယ် ။ ဆက်လက်ပြီး ဒီနေ့အတွက် တောင်သူတွေ အတွက် ပြောပြပေးမှာကတော့ စပါးစိုက်တောင်သူတွေ အတွက် အခုလိုအချိန် မိုးအကုန် ဆောင်းအကူး ဖျက်မိုး လာချိန်ကျ ရင် တချို့နယ်တွေ မှာ အထွက်နှုံးကိုပါ ကျ စေပြီး ၊ စပါးစေ့ အရည်အသွေးကိုပါ ထိခိုက်စေတတ်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးအကြောင်းကို ကျ တော် က ဆွေးနွေးပေးချင်တာ ။ ရောဂါနာမည်ကို တော့ False smut ( စပါးမှိုသီး ) ရောဂါလို့ခေါ်ပါတယ် ။ကျတော်က…
By zinminmaung | November 15, 2020 | 0
ကြွက်နှင့်ပေါင်းပင်များအကြောင်းသိကောင်းစရာ ကြွက်အကြောင်း စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် အရေးကြီးသောဖျက်ကောင်တစ်မျိုးမှာ ကြွက်ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင် အများဆုံးတွေ့ရသော ကြွက်မျိုးများမှာ-၁။ မြေကြွက်ငယ် ၄။ အိမ်ကြွက်၂။ မြေကြွက်ကြီး ၅။ ကြွက်ဖားလောင်း၃။ ကြွက်ဝမ်းဖြူ ၆။ ကြွက်စုတ်၇။ ပွေး ကာကွယ်နှိမ်နင်းရန်နည်းလမ်းများ၏– ၁။ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ခြင်း။ ၂။ ပုံမှန်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း။ ၃။ လက်လုပ်နည်းဖြင့် နှိမ်နင်းခြင်း။ ၄။ မြေအိုးမြှူပ် နှိမ်နင်းခြင်း။ ၅။ သဘာဝရန်သူမွေးနှိမ်နင်းခြင်း။ ၆။ မျှားစာအဆိပ် ပြုလုပ်နှိမ်နင်းခြင်း။ ၇။ ဓာတုဆေးသုံး၍ နှိမ်နင်းခြင်း။ ကြွက်သတ်ဆေးချချိန် ၁။ မိုးစပါး စိုက်ချိန်/ ဖုံးစလုံးစအချိန် ၂။ နွေစပါး စိုက်ချိန်/ ဖုံးစလုံးစအချိန် ၃။ ဆောင်းသီးနှံ စိုက်ချိန်/ ပန်းပွင့်ချိန် ၄။ ပြောင်း စိုက်ချိန်/ အဖူးမဖူးမီ ကြွက်သတ်ဆေးအမျိုးအစားများ-မန္တလာ…
အာလူးစိုက်တောင်သူတွေအတွက်ကောရှမ်းပြည်ဘက် တာဝန်ကျနေတဲ့ ကျတော်တို့စိုက်ပျိုးညီအကို မောင်နှမတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ကျတော်လေ့လာမိသလောက်လေး တင်ပြပေးပါမယ်. အာလူးဆိုရင် အများစု က လောင်မဲ ရောဂါကိုသာ ပြေးမြင်ကြပါတယ် ။ အခု ဒီရောဂါကို ကျတော်အရင် တခေါက်က နောင်တရားဘက်မှာတွေ့ခဲ့တုန်းက စစချင်းမှာ သာမာန် အာလူးဖက်လေးတွေဆိုပြီး ဖာတိဖာသာ နေလိုက်မိတာ အခု ကွင်းဆင်းညီလေး တစ်ယောက်က ပုံပြပြီး မေးတော့ ဟာ ကျ တော် မြင်ခဲ့တဲ့ ရောဂါဖြစ်နေတာပဲဗျ Google ကို ခေါက််ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ………. နာမည်ကတော့ အာလူးကြေးဖတ်ရောဂါလို့ခေါ်ပါတယ်သူကတော့ ဘက်တီးရီးယားရောဂါတစ်မျိုးပါ။ရောဂါဖြစ်စေတဲ့သက်ရှိကStreptomyces Scabies ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ ….. လက္ခဏာကတော့ အာလူးသီးပေါ်မှာ အဖက်လေးတွေဖြစ်နေမယ် ။ အဲအနာဖက်လေးတွေက တအားမကြီးပါဘူး ။ အရောင်ကတော့ အညိုရောင်…
ခရမ်းချဥ်မှာ ထိပ်ပုပ်တာ ဘာကြောင့်လဲ.?
By zinminmaung | October 3, 2020 | 0
ခရမ်းချဥ်မှာ ထိပ်ပုပ်တာ ဘာကြောင့်လဲ.?☑ ခရမ်းချဉ် အသီး စတင်သီးပြီး ဆိုထိပ်ပုပ်သည့် အခြေအနေဟာ ဦးကြီးတို့အတွက် စိတ်ဘဝင်မကျ ဖြစ်ရပါတယ် ဒါကြောင့် သို့လော သို့လော ဖြစ်နေတဲ့ပြသနာကို လေ့လာကြည့်ရအောင် ခင်ဗျ☑ခရမ်းချဥ်သီးမှာ ဖြစ်သော ထိပ်ပုပ်သည့် လက္ခဏာသည် ရောဂါပိုးမွှားကြောင့်ဖြစ်သော လက္ခဏာ မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ…ဇီဝကမ္မပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်လာသော လက္ခဏာ ဖြစ်ပါတယ်✔အသီးများ၏ အောက်ခြေမှစတင်၍ စိမ်းပုပ်ရောင် သို့မဟုတ် အညို့ရင့်ရောင် ရေစိုနာအကွက်များ စတင်တွေ့ရတယ် ဆိုးရွားလာပါက နေလောင်ဒဏ်ရာဖြစ်လာပြီး အသီးတစ်ဝက်ထိ ပုပ်သွားပါတယ်…☑များသောအားဖြင့် ကယ်လ်ဆီယမ် Ca ချို့တဲ့ လျှင် ထိပ်ပုပ်အဖြစ်များပါတယ် ခရမ်းချဉ် အသီးဆီသို့ ကယ်လ်ဆီယမ် ပို့ဆောင်မှုကို ဟန့်တားခြင်းခံရပါက ဖြစ်တတ်ပါတယ်☑ကယ်လ်ဆီယမ် Ca ဓာတ်သည် ရေနှင့်အတူ ရွေ့လျားသွားရတယ်. ရေငတ်ဒဏ်ခံရသော အခြေအနေဟာ အသီးဆီသို့ Ca ဓာတ်…
ငရုပ်ပင်မှာ အပွင့်တွေ တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေတာ ဘာကြောင့်လည်း ?????
By zinminmaung | September 22, 2020 | 0
ငရုပ်သီးနှံဟာဆိုရင်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ကျောက်ဆည် ၊ ကူမဲ ၊ မြစ်သား ၊ မန္တလေး ၊ မုံရွာတကြောနှင့် ဧရာ၀တီတိုင်းတကြောမှာ ငရုပ်သီးနှံကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် စိုက်ပျိုးကြတာကို တွေ့ရပါသည်။ ငရုပ်သီးနှံဟာ နိုင်ငံခြားသို့ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် တင်ပို့ရသော စိုက်ပျိုးရေး ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးကြီးတို့ ငရုပ်သီးနှံ စိုက်ပျိုးကြသည့်အခါမှာ တော်တော်များများ ကြုံတွေ့ရသည်က ပိုးမွှားရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အာဟာရချို့တဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်များလည်း တွေ့ရတက်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ ကျတော်အနေနဲ့ ဦးကြီးတို့ အများစု သတိမမှု မိသည့် အခြေအန တစ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်. အဲဒါကတော့ ငရုပ်ပန်းပွင့်များ အသီးမတင်ခင်းအချိန်မှာ ကြွေကျရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသီးမဖြစ်ခင်းအချိန် မှာ ပန်းပွင့်များ ကြွေကျရခြင်း မှာ အထွက်နှုန်းကို များစွာ ထိခိုက်ရတဲ့အတွက် ဦးကြီးတို့အတွက် အင်မတန်မှ…